Ambassador Ray Vanoti America Haineyi neHurongwa hweZanu PF
Ndira 24, 2011
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Charles Ray, vanoti hurumende yeAmerica haisi kukendenga negwaro renyunyuto kana kuti petisheni inonzi iri kuda kunyorwa ne Zanu PF pamusoro pezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, nevamwe vavo vari muZanu PF.
Ambassador Ray vataura izvi parutivi pemusangano wavaita muHarare pavapa masangano masere mari yekuti abatsirikane mumabasa awo ekusimudzira mararamiro evanhu pasi pechirongwa che Self Help Program.
Ambassador Ray vati Zanu PF yakasununguka kunyora gwaro renyunyuto pamusoro pezvirango izvi, vachiti kodzero dzekuti vanhu vasununguke kutaura zvavanoda, ndidzo dzinoshuvirwa nehurumende yeAmerica kuti dzinge dzichiremekedzwa muZimbabwe pamwe nenyika dzose pasi rose.
Komiti yekurwisana nezvirango zvakatemerwa VaMugabe nevamwe vavo vari muZanu PF inonzi yakaumbwa kuMasvingo masvondo maviri apfuura pamusangano wakapindwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Va John Nkomo, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Va Emmerson Mnangagwa, pamwe nevamwe vakuru vakur muZanu PF vaisanganisira Va Didymus Mutasa.
Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirwa nemutungamiri wechimwe chikwata chevakarwa muhondo yerusunguko, Va Jabulani Sibanda, uye komiti iyi inonzi ine chinangwa chekutsvaga vanhu mamiriyoni maviri vachasaina gwaro
Renyunyuto pamusoro pezvirango izvi.
Zvichakadai, Ambassador Ray vapa mari yeruyamuro inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica kumasangano masere anoshanda neveruzhinji munharaunda dzenzvimbo dzaanoshandira.
Masangano aya anobva mumatunhu mana anoti Harare, Masvingo, Mashonaland West pamwe neMashonaland East.
Ambasador Ray vati hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira masangano akadai kuitira kuti isimudzire mararamiro ezvizvarwa zveZimbabwe.
Mari yapihwa kumasangano masere aya, ayo anosanganisira vanokanya zvidhinha, vanorima mapindu anorimwa zvirimwa zvinovaka muviri pamwe nezvikoro zviviri, iri pasi pehurongwa hwe Self Help Program, uye hurumende yeAmerica inoti yashandisa mari inoita mamiriyoni matatu